संक्रमितको संख्या बढ्दै जानुको कारणहरु... | News Polar
काठमाडौं । सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन) लम्ब्याए पनि कोरोना भाइरस संक्रमण दर दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अव्यवस्थित क्वारेन्टिन, नाका कडाइ नहुनु, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नबढ्नु र सरकारले कोभिड–१९ रोकथामका सन्दर्भमा स्पष्ट खाका बनाउन नसक्दा संक्रमतिको संख्या बढ्दै गएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन् । लकडाउन भएको ६२ दिन पुग्दासमेत संक्रमितको दर घट्न सकेको छैन । हालसम्म ६ सय ८२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । सोमबार मात्रै ७९ संक्रमित थपिएका थिए । यस्तै, कोरोना संक्रमणबाट चार जनाको ज्यान गएको छ ।
– अव्यवस्थित क्वारेन्टिन
– सीमानाकामा कडाइ नहुनु
– कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नबढ्नु
– सरकारले स्पष्ट खाका बनाउन नसक्नु
– परीक्षणको दायरा फराकिलो नहुनु
देशभर ४६ हजार २९ जना क्वारेन्टिनमा बसेका छन् । तर, क्वारेन्टिनमै बसेकामध्ये अधिकांशको कोरोना परीक्षण हुन सकेको छैन । देशभर बनेका क्वारेन्टिन मापदण्ड नपुगेका हुँदा संक्रमणको केन्द्रनै क्वारेन्टिन बन्ने देखिएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर ६१ हजार २ सय ४५ क्वारेन्टिन छन् । तर, अधिकांश क्वारेन्टिनमा ‘क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६’ पूरा गरिएको छैन । जसकारण जोखिम बढ्दै गएको र संक्रमितको संख्या थपिने सम्भावना बढी हुने आँकलन गरिएको छ । संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरुको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने अख्तियारी पाएपनि प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिएको छ ।
दैनिक सयौं नागरिक सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका छन् । तर, उनीहरूको आरटी–पीसीआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण नगरी धमाधम नेपाल प्रवेश पाएका छन् । यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षणको दायरा द्रुत गतिमा बढाउन सकेको छैन । हालसम्म देशभर आरटी–पीसीआर प्रविधिबाट ५१ हजार ६ सय ४२ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.विकास देवकोटाले जानकारी दिए । यसरी हेर्दा पछिल्लो एक साताको अवधिमा दैनिक २ हजार ८ सय ८८ जनाको कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ ।
परीक्षणको दायरा निकै सुस्त भएको भन्दै तीव्र रूपमा बढाउनुपर्ने संक्रामक तथा सरुवा रोग अनुसन्धान विशेषज्ञ प्राडा. जीवनबहादुर शेरचनले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले संक्रमितको अवस्था हेरेर अस्पताल तयारी अवस्थामा राखिएको बताए । उनले भने, ‘संक्रमण जहाँ फैलिन्छ, त्यहाँअस्पतालको स्तरवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।’पछिल्लोपटक वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएका एक पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । अस्पतालमा गत ४ जेठमा निधन भएका कलैया–७ बाराका ७० वर्षीय वृद्धमा कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो । थप पुष्टिका लागि अस्पतालले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा नमुना पठाएको थियो । जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा ती पुरुषको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । यसअघि सिन्धुपाल्चोक, गुल्मी र बाँकेका तीन जनाको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो । हालसम्म निको हुनेको संख्या १ सय ५५ पुगेको छ । राजधानी दैनिक
प्रकाशित : जेठ १३, २०७७, ८:५८:२२